Amazon Fire Ukubuyekeza tablet - Izindaba Rule
Amazon Fire Ukubuyekeza tablet
Kwadingeka okulindelwe aphansi kakhulu esibhebheni £ 50. Kodwa Amazon Fire sephulwe kubo bonke. Empeleni ephawulekayo ngempela ukuthi hhayi-kadoti kuba lapho kubiza kangaka.
Lesi sihloko osesikhundleni “Amazon Fire Ukubuyekeza tablet: a lot of tablet nje £ 50” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesine 12th November 2015 07.00 UTC
zakamuva ongaphakeme izindleko Fire Amazon ubuza umbuzo: can i-tablet amasethi emuva nje £ 50 ngamunye, noma ukuthenga ezinhlanu futhi uthole one khulula, kube kuhle ngaso sonke?
Kuba version yesihlanu Fire tablet original, lapho kuqala umkhankaso e 2011 njengoba umzamo Amazon ukuba behlise Apple iPad futhi ukukhiqiza tablet letibita ukufinyelela izincwadi zayo kanye isiqophi nezinsiza.
A no-frills black matt plastic umzimba. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Thick, shiya ezinye zibe yizinqamu futhi eziqinile iyona incazelo best of the tablet Fire. Inkathi Ehlanganisiwe e ngomala plastic black, isisindo saso singamakhilogremu 313g, uphezu 1cm aminyene futhi uzizwa emikhulu esandleni.
It uzizwa sengathi kungathatha kungqongqoza noma ezimbili ngaphandle udaba. Amazon othi ithebhulethi Fire kabili okuhlala isikhathi eside njengomdala Apple iPad Air 2 e "Tumble test" enkampani. Angikwazi ukukholelwa ukuthi kahle, kodwa ubukhulu bayo ezincane cishe sinendima enkulu kulelo.
Isikhulumi emhlane sikhulu ngokwanele ukuba babukele ividiyo uma aphathwayo, kodwa hhayi elikhulu noma kucace ngokwanele ukuba babukele ividiyo ngenkathi umshini wokuwasha uya esigcwele isikhumba sesilwane esinoboya ekhishini.
Isikrini 7in akuyona HD. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Isikrini 7in akuyona HD. It has isinqumo 1024 x 600 pixels, okuyinto lingaphansi lesinqumo ubuncane 720p HD. It Ubuye kuqhathaniswa eliphansi pixel kwabantu of 171 Amaphikseli intshi per - akusona iPad kodwa kungcono futhi esingaphansi yesithupha yezindleko.
Kodwa screen ngokumangalisayo kuhle intengo. Kuba okunengqondo bright, ine engele okuhle wokubuka futhi colorful, ngisho noma abansundu yayo grey kancane. Kodwa akanawo UkuHlelwa KweDiski Jikelele, ukuze uzoba ngesandla ulungise yona hhayi aphuphuthekise wena ebusuku, futhi kungcono hhayi ncamashi crisp.
Not bad kakhulu ukubukela isiqophi noma ukudlala imidlalo, ngenkathi kungcono passable for ukufunda izincwadi.
Amagama: 1.3GHz isikwele-core
Isitoreji: 8GB; microSD slot iyatholakala
Ikhamera: 2ILUNGU LEPHALAMENDE ikhamera, 0.3MP ebheke phambili ikhamera
Imidlalo, Izinhlelo zokusebenza nama-movie emihle
Lesi sibhebhe Fire ine 5GB umsebenzisi isikhala kwi-ebhodini, nge slot microSD ikhadi yokwengeza more. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Lesi sibhebhe Fire sika 1.3GHz processor 1GB of RAM Ngeke ukusetha ngomlilo emhlabeni, kodwa babebahle ngendlela emangalisayo enekhono testing yami. Ithebhulethi hhayi sprightly ikakhulukazi operation, Ngokuba it alinganiselwe-wagcwalisa.
Imiqophi ukulayishwa futhi wadlala ngokushesha, imidlalo ngamashumi smooth ingxenye enkulu, kuhlanganise imidlalo imidwebo olunzulu ngalo umfowabo yepeni sisikhulu Fire HD 10 ayiminyanisa. Imidlalo efana Isikhumbuzo Valley wathatha ukulayisha kuka i iPad eside, futhi sizibulale phakathi running zokusebenza kancane evilaphayo ngezikhathi ezithile, kodwa lutho nhlobo olwalusesandleni infuriating kakhulu.
Ibhethri eyathatha emhlabeni amahlanu amahora video sokudlala ne screen waphenduka kuze ukukhanya esiphezulu, lesidze kube dim kancane. Ukushaja yayincane, ukuthatha amahora angaphezu kwayisihlanu ukushaja ngokugcwele. The Wi-Fi kanye Bluetooth wasebenza njengoba ungase expect. A slot microSD ikhadi iyatholakala yokwengeza isitoreji esiningi.
Ukungabi i inzwa yokukhanya okuzungezile kusho ukulungiswa ibhukwana backlight edingekayo, ikakhulukazi e Ukukhanya kwelanga noma kusihlwa. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Lesi sibhebhe Fire ugijima version efanayo Amazon-Android 5.1.1 ezisekelwe Fire OS njengoba Fire HD 10. Kwenza kokuthola kokuqukethwe kanye nemidlalo okusheshayo nokulula.
It kuphela likwazi ukufinyelela Amazon lokusebenza esitolo, Nokho, okusho ukuthi kulinganiselwe owukhethayo izicelo kanye imidlalo kuqhathaniswa Store Google Play sika. Iningi, kodwa hhayi wonke zokusebenza phezulu ayatholakala, njengoba usakaza isiqophi izinsiza ezifana Netflix.
The Fire Ubuye service Amazon Underground, alinikela zokusebenza for free with free in-app ukuthenga, uma ubhalisele yenkampani Prime service.
Njengoba ungase expect, Ukuhlanganiswa Amazon video yayo siqu, music, izincwadi kanye namasevisi okuthenga kuyinto enhle.
Amakhamera bampofu, kuphela okuhle ngempela ngokwanele ukuze Snapchat. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ikhamera 2-megapixel ngemuva kuyinto esabekayo. Uveza imifanekiso mayelana izinga elifanayo nemininingwane njengoba ikhamera CCTV, futhi hhayi okuhle. Ikhamera VGA selfie kuyinto encane kangcono, kodwa lokho ethi okuningi.
I-Amazon Fire kubiza nje £ 50 futhi itholakala engenangqondo kancane "ukuthenga emihlanu uthole one khulula" (BFGOF) sipho. Lesi sibhebhe iza ne Izikhangisi esibukweni ilokhi, Nokho, nokususa kubo kubiza £ 10.
I eliseduze amaphilisi babelibiza kusuka Samsung noma Asus izindleko kwatheleka £ 70.
Akusiwona tablet fantastic by yimuphi kungacabangeki. The isikrini isinqumo ongaphakeme, ibhethri Asihlali isikhathi eside, amakhamera yayo kukhona ebuhlungu, kungcono esindayo futhi shiya ezinye zibe yizinqamu futhi kuphela has 5GB of isitoreji sangaphakathi uyatholakala umsebenzisi.
Kuba akukho iPad noma ngisho Nexus 7, kodwa kungcono eshibhile futhi bejabule 7in tablet ukuthi kunjani liyokuma futhi Akukhathaleki uma engenzi ngoba nje ukuthenga enye.
It ngempela kunengqondo uma ubhalisele inkonzo Amazon Prime for isiqophi, izincwadi futhi zokusebenza, kodwa at £ 50 kungcono Thenga ungacabanganga.
Buhle: ezishibhile, video Amazon, izincwadi kanye nezinsizakalo umculo, slot microSD ikhadi, uzizwa okuhlala isikhathi eside
Bawo: low-res screen, esindayo, shiya ezinye zibe yizinqamu, amakhamera abampofu, Kuthatha eminyakeni ukukhokhisa, impilo yebhethri hhayi kumnandi
Lesi sibhebhe ithatha amahora amahlanu ukuze ukukhokhisa nge microUSB. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Amazon.com, Android, Isigaba, Gadgets, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, amakhompyutha Tablet, Technology
← Blackphone 2 ukubuyekeza: ubumfihlo akanayo ukuza izindleko usability testing Facebook Snapchat-style self-destructing lengxoxo Messenger →